Ny tombony azo amin'ny tanimbary artifisialy | JIAWEI
Ny isan-karazany ny zavamaniry voajanahary dia be dia be ary feno ny fomba. Mifototra amin'ny foto-kevitry ny "maitso sy ny tontolo iainana, tsotra ary tsara", miezaka isika hamorona tsena tokana ho an'ny zavamaniry simika, mba hanamorana ny aesthetika amin'ny fiainam-piainan'ny olona, ​​hanova ny fitambaran'ny rivo-piainana ao an-tokantrano, ary hamerina ny fiainan'ny olona hameno izao tontolo izao. miaraka amin'ny fahafinaretana mahafinaritra ary miteraka tontolo rindran-trano mirindra sy tsotra sy tsara tarehy.
Ankehitriny, andao hojerentsika ny tombony azo avy amin'ny zavamaniry simulated
Voalohany: Voalohany, ny teboka voalohany hanombohan'ny olona hisafidy zavamaniry simulate dia ny fampiasana azy ho haingo. Koa satria zara raha voaravaka ny natiora satria misy zava-misy sy mazava, tsara ny vokarina haingon-trano.Artiana voajanahary tsy voafetra amin'ny toe-javatra iainana toy ny tara-pahazavana, ny rivotra, ny rano ary ny vanin-tany na ny tany efitra avaratra andrefana na gobioloongam-poana koa dia afaka mamorona tontolo maitso toa ny lohataona mandritra ny taona rehetra. Amin'ny firenena samy hafa, ny toerana samy hafa dia azo ampiasaina toy ny haingon-trano, toy ny zaridaina, toerana mahafinaritra, faritra ara-barotra, trano fonenana, plazas, tranom-barotra lehibe, làlana ary renirano sns…. miaraka amin'ny hazo artifisialy.
Faharoa: Ny zavakanto tsy manam-pahaizana dia tsy mila fikarakarana manokana isan'andro. Aza rano na zezika. Mila misasa lamba famaohana mando fotsiny isika rehefa misy vovoka eo amin'ny ravina satria ho ela ny vovoka. Tsy ilaina ny mampanahy hoe malazo sy malazo ny zavamaniry. Izy io dia mamonjy ny vidin'ny fitantanana isan'andro sy angovo.
Ny fahatelo: miaraka amin'ny fivoaran'ny fitaovam-panorenana, ny hevitra momba ny famolavolana sy ny fahaiza-mamorona dia navahana, mihabetsaka bebe kokoa hatrany amin'ny habakabaka anatiny ao amin'ny fiainantsika. ny fangatahana amin'ity karazana habaka ity ary mamorona ny vokatry ny faritra dia nahatsapa fa tsy hahatratra ny zavamaniry mahazatra.